ဂိမ်းဆော့ဗ်, ရလဒျမြားနှငျ့ဇယား | Holmbygden.se
– လက်ရှိရလဒ်တွေကို, စားပွဲနှင့်ဂိမ်းများ
– DM အဘို့ပွဲစဉ်ဇယား
– ထိပ်တန်းဂိုးသွင်း, Publikliga, Guldfemman အမ် M က.
– အဆိုပါ 2000 ပြည့်နှစ်အတွက်ယခင်နှစ်ပေါင်း '' ရလဒ်တွေကိုစားပွဲ
– အဆိုပါ 2000 ပြည့်နှစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၏ယခင်အနှစ် '' စီးရီး
A-LAGSKALENDERN – HSK’s match- နှင့်လေ့ကျင့်ခန်း
ဗီဇာ သာပွဲစဉ်ရက်ပေါင်း ဒီမှာ (även GIF Sundsvalls och Landslagets spelprogram).
ကိုယ့် programformat A-lagskalendern (မျိုးကွဲများအပါအဝင်. သင်တန်းများ)
သေတ္တာထဲတွင်ပါသို့မဟုတ်စာစောင်ကိုဘားနှင့်စာနယ်ဇင်းအတွက်လက်ချောင်းဆွဲပါ / နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အအစိမ်းရောင် entries တွေကို click နှိပ်ပြီး.
-Team ပြက္ခဒိန်တစ်လ format နဲ့ (မျိုးကွဲများအပါအဝင်. သင်တန်းများ)
အောက်ကအပြာခလုတ်တွေနဲ့နောက်ပြန် / ရှေ့ဆက် scroll.
မိုဘိုင်း / ပန်းကန် / ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထပ်တူပြုခြင်း၏အခြားပုံစံများအတွက်ပြက္ခဒိန်:
သင့်ဖုန်း, သငျသညျအလိုအလျှောက်ပထမဦးဆုံးအသင်းပွဲစဉ်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်လိုက်တဲ့အခါ- နှင့်သင့်မိုဘိုင်းသင်တန်းအချိန်ဇယားကို updated.
OBS! ပွဲဝင်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ- သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယား.ပိတ်.
သင်တစ်ဦး Android ဖုန်းသို့မဟုတ်မှာ Gmail / Google Account ကိုရှိပါက? ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည်လည်းသင်၏ PC နဲ့သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းပြက္ခဒိန်တွင်နှစ်ဦးစလုံးကိုတှေ့မွငျနိုငျသော Google ကပြက္ခဒိန်, သုံးခွင့်ရှိသည်. အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အထက်ပါပြက္ခဒိန်နှင့်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ. ထိုအခါသင်၏ဖုန်းအတွက်သင့်အကောင့်ဆက်တင်သို့သွားနှင့်သေချာသင်၏ Google အကောင့်ဆဲလ်ဖုန်းနှင့်အတူသူတို့၏ပြက္ခဒိန် synchronizes အောင်. ထိုအခါပထမအသင်းပြက္ခဒိန်ကိုပြသရန်သင့်ဖုန်းရဲ့ပြက္ခဒိန် app ကိုသို့သွားနှင့်စစ်ဆေး.
သငျသညျ Iphone ဖူး? Gå till holmbygden.se/hsklalender (= တိုက်ရိုက်ထိခိုက်) သင့်မိုဘိုင်းဘရောက်ဇာကိုနှင့်အောက်ပါလိပ်စာကူးယူ (သင့်ရဲ့လက်ချောင်းပေါ်မှာကိုင်):
ထိုအခါ browser ကိုပိတ်လိုက်ပါပြီးရင်သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့သွား “setting များကို“, “E-post ကို. အဆက်အသွယ်, ပြက္ခဒိန်“, “အကောင့် Add“, “အခြား“, “စာရင်းသွင်းသောပြက္ခဒိန် Add“, ငါးပိ အထက်မှလိပ်စာ (တက်ရမယ့်အနေဖြင့်အဘို့သင့်လက်ချောင်းပေါ်မှာကိုင် “ငါးပိ”).
အဆိုပါ menus တွေကိုဖုန်းမော်ဒယ်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ.
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာပြက္ခဒိန်ကိုလည်းတွေကို embed နိုင်ပါတယ် verktyget här.
လက်ရှိရလဒ်များ, စားပွဲပေါ်မှာနှင့်လာမည့်တွင် MATCHES
နောက်ဆုံးရရလဒ်များဌာနခွဲ52018
မှာတရားစွဲဆိုမှု၏ပွဲစဉ်အစီရင်ခံစာ Read holmssk.se/alaget နှင့် div5Lokalfotbollen.nu အပေါ် Medelpad.
လာမည့်ပွဲစဉ်တိုင်း52018
စားပွဲတင်ဌာနခွဲ52018
Holmes SK ကိုအချိန်ဇယား 2018
ဂိုးသွင်းနှင့်ပရိသတ် Liga M.M..
ဂိမ်းဆော့ဗ်, ဂိုးသွင်း, publikliga 2017
ထိပ်တန်းဂိုးသွင်း 2016: Holmes SK ကို, အားလုံးအဖွဲ့များ 2016: ဌာနခွဲ 5
Publikliga: ဌာနခွဲ52016.
A-ခြမ်း သို့မဟုတ် Holmes ရဲ့အားကစားကလပ် site ကို.
2000 ခုနှစ်အတွင်းမှာယခင်နှစ်စားပွဲ, ရလဒ်
2017 ဌာနခွဲ 5
ထိပ်တန်းဂိုးသွင်း 2016: Holmes SK ကို, အားလုံးအဖွဲ့များ: ဌာနခွဲ 5
Publikliga 2017: ဌာနခွဲ 5.
2016 ဌာနခွဲ 5
2015 ဌာနခွဲ 5
ထိပ်တန်းဂိုးသွင်း: Holmes SK ကို, အားလုံးအဖွဲ့များ: ဌာနခွဲ 5.
Publikliga: ဌာနခွဲ52015.
2014 ဌာနခွဲ 5
ထိပ်တန်းဂိုးသွင်း: Holmes SK ကို (မျိုးကွဲများအပါအဝင်. အဝါရောင် / အနီကဒ်), အားလုံးအဖွဲ့များ: ဌာနခွဲ 5.
Guldfemman 2014: HSK ရဲ့ Guldfemmansida, 2014:Läs hur det gick för spelarna på Guldfemman 2014.
1/16-နောက်ဆုံး 2014-06-18 Torp Hammar IF – Holmes SK ကို 4-1
2013 ဌာနခွဲ5base / နွေ (5:တစ်ဦး) (ဧပြီလ-သြဂုတ်လ)
lag 1-8 Div များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်.5ဆောင်းဦးရာသီနှင့်ဥပဒေ 9-16 Div မှ6ကျ.
2013 ဌာနခွဲ5ကျ (5:တစ်ဦး)
2013 Distriktsmästerskap (shared 9:တစ်ဦး)
1/32-နောက်ဆုံး 2013-05-22 19:00 Holmes SK ကို – Kovlands IF 6-4 (ပြစ်ဒဏ်များပြီးနောက်)
1/16-နောက်ဆုံး 2013-06-12 19:00 Holmes SK ကို – Lucksta IF 3-0
1/8-နောက်ဆုံး 2013-07-24 19:00 Holmes SK ကို – Ange IF 0-4 (0-0 သို့ 60 ငါ့ကို, HSK စီရင်ချက်။)
Berners ဖလား, အပူဖလား
2012 ဌာနခွဲ5(5:တစ်ဦး)
အရင်းအမြစ်: SvFF och resultat från Holmbygden.se’s SMS ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မေးလ် 2012.
2011 ဌာနခွဲ5(5:တစ်ဦး)
2010 ဌာနခွဲ5(6:တစ်ဦး)
2010 ဌာနခွဲ6(12:တစ်ဦး)
2009 ဌာနခွဲ5(8:တစ်ဦး)
2009 ဌာနခွဲ7(3:တစ်ဦး) “B-အသင်း”
2008 ဌာနခွဲ5(6:တစ်ဦး)
2007 ဌာနခွဲ4(12:တစ်ဦး)
2006 ဌာနခွဲ5(3:တစ်ဦး)
2006 ဌာနခွဲ5Reserve. (5:တစ်ဦး)
2005 ဌာနခွဲ5(4:တစ်ဦး)
2004 ဌာနခွဲ5(3:တစ်ဦး)
2003 ဌာနခွဲ4(10:တစ်ဦး)
2002 ဌာနခွဲ4(7:တစ်ဦး)
2001 ဌာနခွဲ4(4:တစ်ဦး)
အဆိုပါ 2000 ခုနှစ်ကာလအတွင်းယခင်နှစ်များကဆောင်းပါးတွဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
အကျဉ်းချုပ် (SvFF လင့်များနှင့်အတူ) Holmes Sportklubb အဘို့ယခင်ရလဒ်များ
2012 div5(5:တစ်ဦး): Tabell och resultat, Publikliga, Holms skytteliga
2011 div5(5:တစ်ဦး): Tabell och resultat, Publikliga, Holms skytteliga
2010 div5(6:တစ်ဦး): Tabell och resultat, Publikliga, Holms skytteliga
2010 div6(12:တစ်ဦး): Tabell och resultat, Publikliga, Holms skytteliga*
2009 div5(8:တစ်ဦး): Tabell och resultat,
2009 div7(3:တစ်ဦး): Tabell och resultat, DM, Pojkar Div. 2, div.9(“Visa tävlingar”)
2008 div5(6:တစ်ဦး): Tabell och resultat, Holms skytteliga*, Pojkar P14
2007 div4(12:တစ်ဦး): Tabell och resultat, Holms skytteliga*
2006 div5(3:တစ်ဦး): Tabell och resultat,
2006 div5Reserve. (5:တစ်ဦး): Tabell och resultat, Pojkar 10, Pojkar 12 (“Visa tävlingar”)
2005 div5(4:တစ်ဦး): Tabell och resultat,
2004 div5(3:တစ်ဦး): Tabell och resultat,
2003 div4(10:တစ်ဦး): Tabell och resultat,
2002 div4(7:တစ်ဦး): Tabell och resultat, Holms skytteliga*
2001 div4(4:တစ်ဦး): Tabell och resultat, Holms skytteliga*
* မှားယွင်းနေဂိုးသွင်းစားပွဲ (ဂိုးဂိုးစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကအတူမတိုက်ဆိုင်).
အရင်းအမြစ်: Holmes နောက်ဆုံး decenniumet အပေါ်ရလဒ်များ SvFF hemsida.
သငျသညျ, ယခင်တစ်နှစ်ရဲ့ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကျေးဇူးပြုပြီးရှိသည် Do ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့.
2/5: စီးရီး Start ကိုတိုင်း ...